PNGImg: Misintona sary maimaimpoana an'arivony amin'ny endrika PNG | Famoronana an-tserasera
PNGImg: Misintona sary maimaimpoana an'arivony amin'ny endrika PNG
Fran Marin | | sary, dia midika hoe
Rehefa miasa amin'ny tetikasa rehetra avy amin'ny Photoshop izahay, iray amin'ireo lahasa miasa mafy indrindra ny manapaka sary. Ny marina dia tsy mijanona eo ilay zavatra satria tsy tokony hofongarantsika fotsiny ireo zavatra na toetrantsika mba hampidirina azy ao anaty ny forongontsika, fa tsy maintsy mahita ireo sary mifanaraka amin'izany isika. Na izany aza, amin'ny alàlan'ny PNGimg isika dia afaka mamonjy fotoana betsaka satria mitsitsy ny fotoana lanintsika amin'ireo zavatra roa ireo. Momba izany banky lehibe misy sary amin'ny endrika png noho izany ny zavatra sy ny tarehin-tsoratra ao amin'ny sary dia efa voapaika ary vonona ny ho tafiditra ao anaty rakitra psd. Satria banky tsy dia antitra loatra izy io, mety tsy manome antsika loharano ilaintsika foana izany, fa safidy tsara azontsika ampidirina ao amin'ny kitapom-bolantsika.
Ity pejy ity dia manana menio miovaova be izay ahitana sokajy maro be toy ny fiara, natiora, zavamaniry, olona na nofinofy. Azontsika atao koa ny mampiasa ny motera fikarohana mba hahitana ireo zavatra tadiavintsika ireo. Izy io dia manana safidy tena ilaina ihany koa izay ahafahanao misintona fonosana amin'ny endrika zip miaraka amina sary samihafa amin'ny lohahevitra iraisana ary efa nendahina, noho izany dia ho ilaina kokoa sy haingana kokoa rehefa mampiditra sy mampiditra azy ireo ao anaty lamba. Ny tsara indrindra dia pejy fidirana maimaimpoana io. Tsy mila fisoratana anarana izany ary Mazava ho azy fa maimaim-poana.
Azonao atao ny miditra amin'ity banky sary ity amin'ity rohy manaraka ity: http://pngimg.com
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » dia midika hoe » sary » PNGImg: Misintona sary maimaimpoana an'arivony amin'ny endrika PNG
alricotomato dia hoy izy:
Ohatrinona ny kanto amin'ity tranonkala ity, misaotra !!
Mamaly amin'ny alricotomate
Ahoana ny fomba hidirana amin'ny katalaogy pantone amin'ny endrika nomerika?
Hatraiza ny maha-zava-dehibe ny fiasan'ny kerning sy ny fanarahana ny Letters?